KARIERA SAFIRA AO ANTENINA : Manara-maso akaiky ny polisin’ny harena an-kibon’ny tany
Mbola tsy fantatra mazava ny tena zava-misy mikasika ilay voalaza fa fahavakisana karierana safira sy “rubis” ao amin’ny kaominina Antenina distrikan’i Soanierana Ivongo ity. 10 août 2018
Hatreto tsy mbola nisy ny tena nanamarina ny zava-misy any an-toerana, fa mbola samy tatitra avokoa no ren’ireo tomponandraikitra noho ny fahalaviran’ny toerana sy ny fahasarotan’ny fihazoana ity kaominina Antenina ity. Vokatr’izay, dia misy tonga tsikelikely koa ireo teratany vahiny mpividy ity harena an-kibon’ny tany vatosoa ity. Anisan’ireny ireo teratany Thailandey. Manao andiany fito hatramin’ny folo ny fahatongavan’izy ireo ao Soanierana Ivongo.
Mikasa ny hividy ireto vatosoa sy harena an-kibon’ny tany malagasy izy ireo. Raha ny angom-baovao natao tamin’ireo mponina tany an-toerana sy ireo trano fandraisam-bahiny ary nohamafisin’ireo mpitandro filaminana, dia mody maina tsy mahita mpivarotra ity voalaza fa safira sy “rubis” ity izy ireo aloha hatreto.
Maharitra herinandro hatramin’ny roapolo andro ny fijanonan’izy ireo any an-toerana. Noho ny fielezan’ny vaovao amin’ireto teratany vahiny misy milaza fa mameno tanàna ao Soanierana Ivongo ireto, dia tonga any an-toerana ireo “police des mines” misava sy manara-maso azy ireo amin’ny fanarahan-dalàna ara-taratasy mikasika ny fividianany sy fanangonany ireo vokatra safira sy “rubis” avy ao Antenina ireo. Hatreto anefa dia tsy mbola nisy ireo teratany vahiny tratra nividy izany vatosoa izany.
Ny taratasy fahafahana mipetraka eto amintsika ho azy ireo koa ara-dalàna ka manan-jo hivezivezy eran’ny Nosy izy ireo Tsy ahitana fitaovana fitiliana na fandanjana izany sy vola be hahafahana mividy izany koa eny amin’izy ireo. Na izany aza dia mila mailo ireto “polices des mines” ireto satria lalana telo no ahafahana miditra ny kaominina ao Antenina, ny voalohany miainga ao Soanierana Ivongo, ny faharoa miala ao Mananara avaratra, ary ny fahatelo dia miditra avy any Mandritsara Sofia.